Война является ускорение истории | Tokinao
« Rediredy II : fandroahan'omby mahomby | Main | Zanahary ô tahio ny Tanindrazanay! (Noro-Tokinao) »
Mbola hamaly aho fa lavalava ihany, inona koa izao io biby kely io, saika nofafako ny écran-ko marina !!!
Posted by: Kdaombaramita at 2009/03/12, 05:12
Henjana ny lalao ry tokinao a! tena mijanona ho afrikanina ihany ny malagasy satria tena voabakon'ny vola ny fanahy ny tsirairay. Manjaka izany i mamona eto @ tanana ka izao no vokany. Ho ringanina ireo vahoaka ireo satria maditra loatra. Toy ny nanjoa ny tany sodoma sy gomoro!!! Ny iriko anefa dia ny mba hitovy @ ny tao ninive raha mahatsapa tena ny tsirairay. Ho hita eo ny tohiny ny tantara. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra
Posted by: news2dago at 2009/03/12, 06:38
Hamaly an'ilay hoe ahoana no tsy isian'izany intsony any aoriana. Ekeko zato isan-jato izay : l'histoire est un éternel recommencement. Kanefa alohan'ny hanamelohana ny fihetsiky ny tafika sy ny mpanohitra, tsara holanjalanjaina ihany ny mety ho fizotry ny tantara raha toa ka hijanona fotsiny tsy hihetsika izy ireo fa hanaiky ny mbola fanajàna ny "ara-dalàna" amin'izao fotoana izao.
Fa ny horesahiko dia hoe inona no antony nampipoaka ny sarom-bilany tamin'ity indray mitoraka ity? Diso fihevitra tanteraka ny amin'ny atao hoe "stabilité politique" Ravalomanana sy ny mpomba azy. Ny stabilité politique dia tsy ny fanananao olona mpanoa anao 100% ao amin'ny Antenimieran-doholona sy ny tsy fisian'ny mpanohitra ao @ Antenimierampirenena. Tsarovy tsara fa fony vao nahazo seza Ravalomanana dia niara-niasa tamin'ny loholona Arema 67%, kanefa dia ny tànan-kavanan-dRavalomanana tamin'izany fotoana izany no filohan'io andrim-panjakana io. Izany tompoko no stabilité politique. Vitsy ny vahoaka tamin'izany no nitaraina, ary izay nitaraina dia afaka niandrandra an'ireo solombavambahoaka sy Loholona Arema mba hampita ny mahory azy any amin'ny mpitondra.
Raha mbola iverenana ny 2002 hoe naninona Ratsiraka no tsy maintsy nesorina teo amin'ny fitondrana tamin'ny fomba rehetra dia satria tamin'izany dia nanao an'io hadisoana nanana 100% tao amin'ny antenimiera io ny Arema, ka lasa fitondrana tsirefesimandidy.
Koa misy tompoko ny fomba ahafahana manangeza ny fe-potoana hiverenan'ny krizy eto amin'ny firenena dia ny politikan'ny "miara-mipetraka". Ny hery politika dia toy ny olona eo ambony balançoire: Ny mpitondra eo andaniny ary ny mpanohitra eo ankilany. Rehefa mitovitovy ny lanjan'ny roa tonta dia miaka-midina eo izy, ka izay hetsiketsika moramora izay no atao hoe "stabilité politique". Fa rehefa avy ny mpitondra ka manao hoe sao mihamaro iretsy andaniny ka aleo esorina, dia miala tsikelikely tokoa izy, fa saingy rehefa tsy misy eo intsony izy dia ianao maro an'isa no mirodana ho azy rehefa tsy misy contre-poids, ary looooooza ny fianjerany.
Koa ny vahaolana ho an'izay mpitondra ny repoblika fahefatra ho avy eo dia ny famelana ny mpanao pôlitika hafa haka seza kelikely kokoa. Raha atao hoe fidiana izao ohatra ireny chef de région ireny, ka betsabetsaka tsara ny vola afaka hiasàny hanatsaràny ny tanàna, angamba mba hianona ho chef de région ry Roland Ratsiraka sy Lahiniriako Jean. Marina fa ho be fitsikerana ny mpitondra foibe izy hanafenany ny tsy fahombiazany, fa ny vahoaka nifidy azy no hitsara azy. Ny vahaolana iray lehibe faharoa dia ny fanatsarana ny rafi-pifidianana, ka lalàna sy fitsipika ifanarahan'ny rehetra no hampiharina.
Mila asiana tombokase koa ny Lalàm-panorenana vaovao vao hajoro, mba tsy ho mora vetavetaina, ohatra hoe soratana ho andininy ao amin'ny Lalàm-panorenana hoe raha misy Filoha te hanitsy ny Lalàm-panorenena dia mila mametra-pialàna izy aloha, ka rafitra tateza-mita no hikarakara ny fifidianana handaniana ny fanovana andininy amin'ny lalàm-panorenana. Na koa hoe alohan'ny hahafahana manova ny Lalàmpanorenana dia mila aely eny am-pelatànan'ny vahoaka ahafahany mandinika sy mifandresy lahatra mandritra ny 200 andro ilay volavolam-panovàna, ary aorian'io fetr'andro 200 farafahakeliny io vao azo atao ny fifidianana.
Posted by: DotMG at 2009/03/12, 06:39
na le pont na la pont dia Tatezana foana io...
DotMg : mila atao "béton armé" le tatezana ngô dia dò anaty rano daoul.
Posted by: ikalamako at 2009/03/12, 09:34
>>>>DotMG: misaotra anao indrindra nanazava io fomba fijerinao io. Azoko tsara ny tianao tenenina. Mahafinaritra koa ilay finiavanao hanazava fa tsy sanatria hanabatibaty na dia eo aza ny fijery tsy mitovy.
Niresaka momba ny "stabilité politique" ianao. Ny fijeriko manokana azy io dia somary mifanipaka amin'ny anao, ny antony lehibe dia noho isika mbola tany mahantra. Azavaiko ny hevitro :
- Aty amin'ny tany mahantra dia marefo ny lalàna (ny marimarina kokoa: ny fampiharan-dalàna). Malemy sy tsy mahaaraka ny setrasetra isan-karazany misy eo amin'ny fiaraha-monina ireo sokajy isan-karazany natao mba hanaraka ny fampiharan-dalàna : dia ny "fitsarana", ny polisim-pirenena, ny zandarmaria (ary amin'ny sehatra avoavo kokoa : ny miaramila). Noho io toetra mampiavaka ny tany mahantra io, dia mora ny manakorontana (jereo ny tranga maro ao Afrika : Comores, Sierra-Leone, Guinée-Bissau, ,...). Eo amin'ny lafiny pôlitika dia toy izany ihany : mora ny mandrodana fitondrana, indrindra moa raha toa ka marefo ny ekipan'ny filoha faratampony.
1*Ampahatsiahiviko ny nanjo an'Itompokolahy Ratsimandrava : izay tsy voaaro araka ny tokony ho izy, ka dia nararaotin'ny sasany fotsiny. Avy eo moa dia tsy nisy birao na filan-kevitra nahavita ny hanadiady ny zava-niseho akory nefa dia "filoham-pirenena no maty".
2*Ampahatsiahiviko manaraka ny nanjo an'i Zafy Albert : noho ny tsy maha-mpanefoefo ny lehilahy dia tsy afaka nanohana araka ny tokony ho izy ny ekipany izy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ho vokany dia : tratran'ny fampiatòna ny lehilahy (empêchement) ary dia nirodana nanomboka teo ny fitondrany. Ny asa izay sahanin'ny governemanta moa dia tsy nandeha araka izay noeritreretin'ny filoha faratampony ; ka tsy hita mazava izay omena tsiny : ny filoha izay tompon-kevitra ve sa ireo mpanatanteraka izay tsy mitovy hevitra sy tsy resy lahatra akory amin'ilay asa.
Ireo tranga ireo dia mitarika ny mpitondra iray hatrany hanamafy orina ny fitondrany. Voajanahary izany, ary tsy misy mpitondra tsy maniry ny hodidìnin'ny olona mahay miara-miasa aminy. Ny tsy mety angaha dia ny hoe : tena tsy misy mpanohitra mihitsy.
Noho ireo dia ity manaraka ity no ampitahaiko amin'ny "stabilité politique" :
Ny "stabilité politique" dia toy ny fifandan-jan-kery misy amin'ireo firenena rehetra manerana an'izao tontolo izao "rehefa tsy misy ny ady lehibe" : Raha sendra misy firenena lehibe mitovitovy hery nefa tsy mifanaraka hevitra manko dia ho ady be ny vokany (toy ny ady lehibe voalohany, faharoa, ary ady mangatsiaka nisy teo amin'ny amerikana sy rosiana). Raha vao lefilefy kosa ny iray amin'ireo dia milamina ny tany : "ny mahery kokoa" lasa manaja tena tsy fidina (hanao tsindrio fa lavo àry ve moa), ny resy lasa mipetrapetraka sy tonga saina ary mitady hevitra tsara hafa. Ny firenena matanjaka ankehitriny moa no tsy miady, dia satria mifampatahotra ry zareo, ary satria koa hain'ny firenena malemy tsara ny hatanjaky ny sasany. Ny tany moa no toy izany dia satria : tsy misy "Andriamanitra materialy afaka hitsara ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany". Ny "ONU" no natsangana mba hanao izany asa izany, nefa haintsika ihany fa ny firenena matanjaka no ao.
Dia toy izany koa no tokony ho fifan-danjan-kery hisy ao anatin'ny stabilité politique, indrindra raha marefo ny fampiharan-dalàna.
Raha fintinina dia "tohanako ny mahabetsaka kokoa ny mpomba ny fitondrana ao anatin'izany fitondrana izany".
Momba ilay resaka fanovana lalam-panorenana indray kosa :
- ekeko ny tsy fahatomombanan'izy io ankehitriny. Nefa raha raisina koa ilay ohatra narosonao voalohany ho vahaolana dia toa tsy hahomby : raisiko ohatra hoe filoha ny tenako, ary efa betsaka ny "mandat" vitako. Koa mba hampiakatra ny mpomba ahy (ny zanako ohatra) ho eo amin'ny toerako dia avoakako ao amin'ny lalam-panorenana fa "ny mpanohitra dia tsy mahazo milatsaka ho fidiana" [voasoratra amin'ny fomba diplômatika mazava ho azy :)]. Fanampin'izany dia ho sarotra ho an'ny tantara ny hitsara hoe : ilay filoha nanova lalam-panorenana ve no diso, sa ilay filoha mpandimby izay niharan'ny fanovana lalam-panorenana. Hany ka lasa baranahany sy tsy voafaritra tsara izay tompom-pahadisoana.
Ny eritreretiko ho tsaratsara kokoa angaha dia ny fampandraisana anjara an'ireo antoko pôlitika maro rehetra amin'ny fandrindràna ny lalam-panorenana. ohatra hoe :
- raha misy 9 ny antoko pôlitika (ny iray amin'izany dia ny antokon'ny filoha, na dia tsy soloiny tena aza). Alohan'ny anontaniana ny vahoaka (fitsapan-kevi-bahoaka) dia tokony ho lanin'izy ireo fa azo aroso ilay hevitra. Ary ao anatin'izany fandaniana izany dia manana lanja betsaka kokoa ny filoha. Ohatra hoe: manana vato iray avy ny antoko 9, ny filoha kosa manana vato 4. Azo alalinina fa ohatra ihany io ahy io (toy ny fiasan'ny ONU no tiako alain-tahaka).
Ilay soso-kevitra faharoa narosonao moa dia ekeko raha izaho manokana no mifidy : tsy misy maharatsy ny fanomezana fotoana ny vahoaka mba hierireretany. Ny fampiharana angaha no mety ho taraiky, nefa ny fotoana dia volamena.
Posted by: Tokinao at 2009/03/12, 20:11
ka za anie efa miteny hoe jungle country isika ee...
aza omena tsiny e, toy ny "chose" politika rehetra ireo zavatra nolazain'la ireo, ampiasaina @ mampatsaratsara ny tarehin'ny fandehan-javatra fotsiny... fa tsy natao hianteherana akory :)
ekeko ilay hevitra fa saingy hoe... ra te handroso marina i Dago dia mila "bon dictateur"... olona afaka mitondra ary manao mafiloha, manery ny vahoaka, hoan'ny tombotsoan'ny tanindrazana (no offense, fa isika kamo hiasa, tsy te hisasatra fa te hana-karena sy hanana ny tsara fotsiny @ izao an)... ra tsy izany dia lasa bordel be otran'ny t@ Zafy Albert io. Vao mia hiha-hahantra be isika, ny corruption tsy lazaina intsony,...
Pire encore, mety ho-ratsy noho i ra8 ilay mpitondra manaraka eo... dia averina ndray ny grevy ee. Zavatra mba haintsika kosa ve moa, efa tsy hahomby ihany ny barea, tsy aleo mba aseho? hihi
-> izao ilay teneniko hoe, tokony atao mangarahara ilay transition fa tsy hoe transition dia izay... mila business plan mazava tsara...
rediredy be ny ah fa iza no mahita, tsy aleo manonofy aloha
Posted by: simp at 2009/03/12, 20:14
Ekeko tanteraka ilay fijerin'i simp amin'ny mahatsara ny "bon dictateur".
Hitako ho mifandray ny zavatra resahintsika.
Raha mandinika manko isika dia :
Tsy maharitra eo amin'ny fitondrana mihitsy ny "tsy diktatera" aty amin'ny firenena mahantra. Betsaka ny ohatra ary tsy malaza loatra izy ireo noho izy nandalo fotsiny ihany. Ary raha vao ny fitondrana no misolosolo lava dia "fahavoazana lehibe" : tsy mitohy ny asa. Ny mety ho korontana sy faty olona tsy tenenina intsony. Ireo "dictateur" kosa (na tsara na ratsy) dia maharitra : tranga any Lybie, tany Cuba, sns.
Koa ny hany hitako ho vahaolana dia io "dictateur tia tanindrazana" voalazan'i simp io : olona mahavita hanery ny vahoaka hiasa [izany hoe tsy maintsy manome asa izy aloha :)].
Raha hiverina amin'ny raharaham-pirenena isika : ny roa tonta lehibe ankehitriny dia samy manana toetra-na "dictateur" ; tsy laviko izany. raha dinihina kosa anefa hoe iza no tia tanindrazana dia ... ampitahao ny efa zava-bitan'ny roa tonta e : ny an-dRavalomanana misimisy kokoa (na fony naha-"maire" azy izany na nandritra ny nitondrany [ny làlana, ...]).
Maninona moa raha mba natontan'i Andry ho amin'ny fanatsarana an'Antananarivo izao volabe nikarakarana fanonganam-panjakana izao? : noho ny fitiava-Tanindrazana ve sa fitiavan-tseza ?
Farany dia hoy aho hoe : "aza mba miantsampy amin-kazo tsy fantatra ihany e!".
Posted by: Tokinao at 2009/03/12, 20:49
iza fotsiny no afatro o an-tsika rehetra: vola tadiavina mba hinanan ny ankhonana fa na i ra8 na ra tgv tsy msy hnome anao varysy laoka iray vlia akory izay mantsy ilay hoe ano ny hania fa ny harena mila vintana
Posted by: noufe at 2009/03/13, 14:38
Raha izaho no dictateur, alefako mody daholo ireo taim bazaha rehetra ireo fa ireo ihany no ambadik'izao rehetra izao
Raha tsy izany ve hanitsakitsaka tanindrazana toy izao Andry Rajoelina?
Ary nahoana no tsy ireny vazaha manan-karena ireny no robaina fa tsy ny gasy kely vao miarina e?
Posted by: Leo fanimbana at 2009/03/14, 05:50
Ohatra mivaingana anohanako ny hevitr'i Tokinao, ary anontaniako ny hevitr'i DotMG :
Hilamina ve ny planeta tany raha toa ka ny mpanohitra "mondial" no ho maro an'isa ao @ "conseil de securité"-n'ny Nations-Unis. Izany hoe : omena veto koa ry Iran, Irak, Ben Laden, sns.
Ary koa, raha hitondra fanjakana i Andry any Aoriana any, hilamina ve i Madagasikara raha hahazo toerana 50% ny depiote TIM? Tsy ho empêché ao anatin'ny 1 volana hahahaha ?
Posted by: Ndriana at 2009/03/14, 09:27
zany tokoa alo e.na iza mitondra eo na iza,de ny fiainako mitohy foana.Ny ankohonana tsy maintsy mihininana.
io ko anie de zao e:na tsy mi-grevy eny @13m. na eny mahmasna aza ny ol iray na maromaro,refa hisy ny hanongana fanjakana de lasa mitohana avokoa ny raharaham-panjakanan na mikatso mihintsy.(tsy mianatra ny mpianatra,tsy miasa ny mpiasa,mis ny baranahiny:@zao fotoanaza zao de mivarotra eny afovoandalana ny mpivarotra,ny bus tsy mijanona eny @ arrêt,sady mandray ol no mandeha ny fiara fa tsy mijanona,...)
Ianareo ve mieritreritra fa ny olona rehtra teto Antananarivo reo olona ao @ 13 ma na mahmasina reo? TSIA.
Ie,raha miteny oe vahoaka aloha zany dia ny olona rehetra ,nefa zahay tsy migreeeevvvyyyyy zany akooooorrriiiny.Ka nareo malagasy monina any ivelany ko izany dia vahoaka malagasy.Ianareo ko zany mitolona an!fa mody tsy miteny eo.!!!
zah aloh zay efa niteny e.
Manana fianakaviana any ivelany aho,maromaro izy ireo,ary dia mitovy hevitra avokoa fa oe:ny vahiny no ao ambadik'i Andry @ ty rahrah ity,mbola maro mo ny hevitra lazain-dry zareo fa aleo tsy soratana eto.ary dia sorena mo zareo maheno vao2 avy aty.koa manasa ny malagasy izy ireo mba hitandrina noho io hevitra io.
Ataoko ahoana mo ry 'reto no hitsangana sy hilaza @ vahoaka oe "misy ambadika anie izao tolona ataonareo izao?".tsy izah ndray no voatoraka kiraro eo.?
Dia samia mivavaka ho any Tanindrazana.Izay sisa no azoko aroso ho anareo.
MIBEBAHA RY OLONA REHETRA ,MIBEBAHA RY VAHOAKA MALAGASY;
MIBEBAHA ARY TSY MANAO IZAY RATSY eo imason'I Jehovah Andriamanitra.Tsy mamerina izay toetra ratsy efa natao.Ary tokony hahatsapa tena ny malagasy tsirairay fa MPANOTA ISIKA?Toy ny mponina tao Ninive.
zay fa lasa mpitory teny aho marina. hihihi
Posted by: lulu at 2009/03/17, 13:43
ela ela aho ra Toky vao eto a!fa inona tsara mo no dikan'io lohateny io?
mety ve ra ianatra tenim-pirenena ao aminao aho? zany oe voatery par correspondance zany v?nefa aho te hahita be anao. ihihiih sérieuse anie zany ehhh!
Posted by: avance at 2009/03/17, 13:52
Ô ra toky a. fa inona lesy ty hampianatra teny ty a?
halazako anie elah!
Posted by: ny akama at 2009/03/17, 13:55
mba hampianaro hono izy toky an fa inona aza ity, fa inona no dikan'io teny io e,
ary adresse IP diso angamba io lazainao io fa toa an'olona fantako manko izy io.:) :) :)
raha tsy diso aho e,
Posted by: Sitraka at 2009/03/19, 13:37
loufe, Leo fanambaniana, Ndriana : Misaotra indrindra anareo mandray anjara amin'ny ady hevitra. Azafady faizao vao tafanoratra aho.
lulu: isaorana anao ny hafatra mahasoa napetrakao.
avance-ko :) : afaka ampianariko tenim-pirenena mihitsy ianao 'ka. Toy ny tenim-pirenena malagsy ohatra hihihi. Tongava aty amiko fa zah koa te ahita an'i avance-ko e ;). Fa aiza moa ianao? ;). [tsy azo atao henon'i akama izao resatsika izao a :)]
akama: halazanao amin'iza aloha? hihihi
Sitraka: an'olona fantatrao tokoa izy io 'ka :). Gaga mantsy aho raha tsy fantatrao ny tompon'io IP io. Ny masina ange tsy mba diso e :).
saika adinoko : ny dika'io lohateny io hono ia : "fanafainganana tantara ny ady" ... hoy google.
Izay mahita diso amin'io teny vahiny io dia mba ahitsio eto ange ny tokony ho izy azafady :).
Posted by: Tokinao at 2009/03/19, 17:41
fa malahelo azy angaha toky, afaka teneniko aminy anie e, sady izy izao efa hody any an-tanindrazana :) aleo alou hazava @ toky fa tsy avance io an, olona hafa ndray, toky anie tena be fan mihintsy e :):)
Posted by: Sitraka at 2009/03/20, 05:41
alazako @ dada sy neny,zoky sy zandry letia a!
Posted by: akama at 2009/03/21, 11:44
sao de asiana fikambanana "FAN"atao ry Tokinao an! LOL
raha misy dia lazao mialoha aho,fa mba hiditra ihany ko.
Posted by: lulu at 2009/03/21, 12:02
tsy azoko tsony le resaka :)
Sitraka, akama, lulu : tsisy azoko le resakareo hihihi
-> Sitraka : malahelo an'iza ? hihihi
-> akama : ndana lazao an'i zokinay àry e hihihi
-> lulu : tena hevitra mety le fan club-n'i Tokinao hahaha
Posted by: tokinao at 2009/03/21, 17:04
na za koa aza tsy mahazo :)
ka zay anie no nitenenako hoe diso io i p (titre) io e sao dia ity no izy 217.12.10.219 marina moa o tsara ngamba raha hamarinina kely o
Posted by: Sitraka at 2009/03/25, 12:41
>>>Sitraka : aleo atao hoe diso tokoa àry e :). tsy voatery ho marina ange ny masina e :)
Posted by: Tokinao at 2009/04/06, 21:27
217.12.10.219 ahoana ? Ary mahay teny rosianina kay i Tokinao.
Posted by: Vladimir at 2009/04/08, 10:48
>>>>vladimir : hay ve teny rosiana io e :). Vazivazy fa izao : tsy mahay teny rosiana aho na dia mahay teny vitsivitsy maromaro : fiarabana, fisaorana, sns. Ary tsy mahamenatra ahy ny tsy fahaizako izany :). Mba toy ireny vahiny tsy mahay teny gasy ireny nefa kosa miezaka :). Azoko antoka tokoa fa misy diso io lohateniko io satria nijery rakibolana aho dia niezaka nandrafitra lohateny fotsiny. Ianao ... raha mahay dia iangaviako mba tsy hisorona ka hanitsy ahy :).
Ny antony nifidianako teny rosiana ho lohateny dia saika nokarohiko ny orijinaly amin'ilay tenin'i Lenìna.
Posted by: tokinao at 2009/04/08, 18:43
было интересно прочесть, интересно пишете
Posted by: Inderemoors at 2013/05/09, 05:01
Позитивное сообщение (;
Posted by: Felppierponge at 2013/05/23, 22:19